नेपाल आइडल आयोजक भन्छन् 'भोटिङबाट १७ लाख रुपैयाँमात्र प्राप्त भएकाे छ'
गायनमा आधारित रहेर बनेको नेपाल आइडल पछिल्लो समय चर्चाको साथै विवादित बनिरहेको छ । गत हप्ता कुनै पनि प्रतिस्प्रर्धिलाई आउट नगरेको भन्दै समाजिक सञ्जालमा नेपाल आइडलको विरोध गर्नेको जमात बढेको थियो । पैसाको कमाउनको लागी भन्दै कतिले नेपाल आइडललाई पैसा कमाउने भाडो समेत भन्न भ्याएका थिए । तर यति बेला नेपाल
‘हट’ अवतारमा नायिका प्रियंका कार्की र बैंकर रविना देशराज
पहिरनको बिषयमा सचेत अभिनेत्री भित्र पर्छिन् प्रियंका कार्की । कुनै पनि कार्यक्रम पुग्दा फरक शैलीको गेटअपमा प्रियंका पुगेकी हुन्छिन् । प्रियंकाले हालै आफ्नो अफिसियल इन्ट्राग्राम एकाउन्ट मार्फत एउटा फोटो सेयर गरेकी छिन् । उक्त तस्बिरमा उनको साथमा बैकंर रविना देशराज छिन् ।
के भयो नायिका मेनुका प्रधानलाई, किन हिँड्दिनन् ‘२ रुपैयाँ’ को प्रोमोसनमा ?
कलाकारको लागी चलचित्रमा अभिनय गर्नु जति महत्त्वपूर्ण मानिन्छ उति नै प्रमोसनमा हिड्नु पनि मानिन्छ । कतिपय अवस्थामा एउटै चलचित्रले पनि कलाकारको करियरको बाटो मोड्दिन सक्छ । प्राय जसो कलाकारहरू आफू अभिनित चलचित्र प्रदर्शनको संघारमा आइपुग्दा जोडतोडले प्रमोसनमा लाग्छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा छचल्किँदै आना शर्माकाे प्रेम
चलचित्र ‘जेरी’बाट रजतपटमा डेव्यु गरेकी नायिका आना शर्माले समाजिक सञ्जालमा सक्रिय छिन् । हालै उनी अभिनित चलचित्र ‘ग्याङस्टर ब्लुज’ प्रदर्शनमा आएको थियो । पहिलो चलचित्रबाट वाहवाही बटुलेकी आनाले दोस्रो चलचित्रबाट सोचेको जस्तो प्रतिक्रिया पाइनन् । आनाले पहिलो चलचित्रबाट निकै फ्यान फलोइङ बटुलेकी थिइन् ।
सलिन र साम्राज्ञीको 'ए मेरो हजुर २' चल्नु पर्ने ५ कारणहरू
अभिनत्री झरना थापाको निर्देशनमा तयार भएको चलचित्र 'ए मेरो हजुर २' यही शुक्रवारबाट रिलिज हुँदै छ । चलचित्रको प्रसारप्रचारको लागी चलचित्र युनिटले केही दिन अघिमात्र मोफसलको यात्रा सम्पन्न गरिसकेको छ । चलचित्रमा नायिका साम्राज्ञी राज्य लक्ष्मी शाह, नायक सलिनमान बनियाँ, सलोन बस्नेत लगायतका कलाकारको अभि
आसिफले निश्चललाई बोक्दा, स्वस्तिमालार्इ भयो गर्मी, बाहिरियो ‘२ रुपैयाँ’को रमाइलो तस्बिरहरू
आउदो भदौ २३ गते प्रदर्शन मिति तय गरेको चलचित्र ‘२ रुपैयाँ’ यति बेला प्रमोसनमा व्यस्त छ । चलचित्रको ट्रेलर र गीतहरू सार्वजनिक भइसकेका छन् । ‘कुटुमा कुटु’ बोलको गीतले छोटो समयमा नै करोड भ्यु पुराएर सेलिब्रेसन समेत गरिसकेको छ । यति बेला चलचित्रको ट्रेलरमा रहेका केही संवादहरु युवामाझ चर्चित बनिरहेका छन्
सिनेपाटी 2074, भाद्र 6, मंगलबार |
अभिनेता रमेश उप्रेती भन्छन् 'अमेरिका बस्दा कहिले खुसी थिइन्'
दशकका चर्चित अभिनेता हुन रमेश उप्रेती । उनले 'गाजल', 'अप्सरा', 'नेपाल प्यारो छ' लगायतका दर्जनौ चलचित्रमा काम गरेसकेका छन् । चलचित्र क्षेत्रमा नाम कमाउदै गर्दा अमेरिका भासिएका रमेश आफु अमेरिका बस्दा खुसी नभएको खुलाएका छन् ।
सिनेपाटी 2074, श्रावण 28, शनिबार |
सकिएको हो निखिलको स्टारडम ?
एक जमना थियो जतिबेला अभिनेता निखिल उप्रेतीको पोस्टर हेरेकै भरमा फिल्महरु चल्ने गर्दथो । एक्सन स्टारका छवि बनाएका निखिल अभिनित प्राय चलचित्रहरु एक्सन प्रधान नै हुने गर्दछ । ‘पिंजडा’बाट डेव्यु गरेका निखिलले कहिले सात तला बाट हामफ्यालेर चर्चामा आए त कहिले बलि रहेको आगोमा कुदेर चर्चामा आए ।
सिनेपाटी 2074, श्रावण 25, बुधबार |
किन छाेडिन् रेखा थापाले कमल थापाकाे साथ ?
केही समय अघि मात्र राप्रपा एकीकरण भएसँगै राजनीतिमा प्रवेश गरेकी रेखा थापाले राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाको साथ छोडेकी छिन् ।
सिनेपाटी 2074, श्रावण 24, मंगलबार |